Talking about likes and dislikes - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on October 8, 2013 at 14:32 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
One man's meat is another man's poison. လူတစ်ယောက်နှစ်သက်ရာသည်အခြား တစ်ယောက်အတွက် မနှစ်မြို့ရာဖြစ်တတ်သည်။ ကိုယ်ကြိုက်တာ သူကြိုက်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်၍မရ။ ကိုယ်ကြိုက်တာ သူမကြိုက်ရကောင်းလား ဟုမြင်၍မရ။ ကွဲပြားမှုကိုလက်ခံပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် သူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက်ကလေးများ အကြောင်းဖလှယ်ရသည်။ ကြိုက်မကြိုက်သည် ခံစားချက်ဖြစ်သဖြင့် ဒီဂရီအနည်းအများရှိသည့်အတွက် သုံးနှုန်းပြောဆိုပုံများသည်လည်း အမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။
"I love eating ice-cream." ရေခဲမုန့်စားရတာသိပ်ကြိုက်တာပဲ။
"I adore sun-bathing." နေဆာလှုံရတာ မြတ်နိုးသည်။ ( adore = love and respect (someone) deeply.)
"She's mad about that new boy band." ထိုယောက်ျားလေးအဆိုအဖွဲ့အပေါ်သူတမ်းတမ်းစွဲဖြစ်နေသည်။
"He's crazy about that girl." သူသည် ထိုမိန်းကလေးအပေါ်ရူးသွပ်စွာစွဲလမ်းနေသည်။
"She's fond of chocolate." ချောကလက် တော်တော်နှစ်သက်သည်။
"I like swimming very much." ရေကူးရတာအလွန်ကြိုက်သည်။
"He really likes that new golf course." သူဂေါက်ကွင်းအသစ်ကို တကယ့်ကိုသဘောကျတယ်။ (really တွင်ဖိ၍ပြောရသည်။)
"He quite likes going to the cinema." ရုပ်ရှင်ရုံသွားရတာသူကြိုက်တယ်။
"I like cooking." ချက်ရပြုတ်ရတာကြိုက်တယ်။
ကြိုက်သည်လည်းမဟုတ်၊ မကြိုက်သည်လဲမဟုတ် (ထူးမခြားနား)
"I don't mind doing the housework." အိမ်အလုပ်တွေလုပ်ရလို့လဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ (စိတ်မရှိဘူး)
"I don't really care either way." ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သိပ်ဂရုမစိုက်ပါဘူး
"It's all the same to me." ငါ့အတွက်တော့ အတူတူပါပဲ။
“It’s so-so.” ဒီလိုပါပဲ။
"She doesn't like cooking very much." သူချက်ရပြုတ်ရတာ သိပ်မကြိုက်ဘူး။
"He's not very fond of doing the gardening." စိုက်ရပျိုးရတာကို သိပ်မနှစ်သက်ဘူး။
"He's notagreat fan of football." သူဘောလုံးပွဲကြိုက်သူတော့မဟုတ်ဘူး။
"Horse-riding isn't really his thing." မြင်းစီးပြိုင်ပွဲဟာ သူ့အကြိုက်တော့မဟုတ်ဘူး။
"I dislike wasting time." အချိန်ဖြုန်းတာကိုမကြိုက်ဘူး။
တစ်ခုခုကို မနှစ်မြို့လျှင်၊ မုန်းတီးလျှင်
"I don't like sport at all." အားကစားကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး။
"He can't stand his boss." သူ့သူဌေးကိုနည်းနည်းမှ(သီးမခံနိုင်)မကြိုက်ဘူး။
"She can't bear cooking inadirty kitchen." မီးဖိုချောင်ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်ထဲချက်ရပြုတ်ရတာ မခံစားနိုင်ဘူး။
"I hate crowded supermarkets." လူရှုပ်တဲ့ကုန်တိုက်တွေမုန်းတယ်။
"He detests being late." နောက်ကျရတာကို ရွံမုန်းတယ်။
"She loathes fish." သူကငါးဆိုရင်ခါးခါးသီးပဲ။
Dislike formal ဖြစ်သည့်စကားလုံးဖြစ်သည်။
Fond of အစားအသောက်နှင့်လူများအပေါ်စွဲလမ်းနှစ်သက်မှုတွင်သုံးသည်။
ယေဘုယျကြိုက်မကြိုက်ကိုပြောရတွင် like + Noun (something) or like + Ving (doing something.) like + to + Vinfinitive ပုံစံနှင့်သုံးသည်။
“I like to . . .” အား "I'd like…" နှင့်မရောပါနှင့်။ ၄င်းသည် အနာဂါတ်တွင်လုပ်ချင်သည့်အရာ ကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်။
very much သို့မဟုတ်alot ကဲ့သို့သောစကားလုံးများသုံးရာတွင် ၄င်းတို့ အထူးပြုသည့်စကားလုံးနောက်တွင် ထားရသည်ကိုသတိပြုပါ။
ဥပမာ "I like reading very much." NOT "I like very much reading."
Dialogue about Expressing Like and Dislikes
One man's meat is another man's poison. လူတဈယောကျနှဈသကျရာသညျအခွား တဈယောကျအတှကျ မနှဈမွို့ရာဖွဈတတျသညျ။ ကိုယျကွိုကျတာ သူကွိုကျလိမျ့မညျဟု မြှျောလငျ့၍မရ။ ကိုယျကွိုကျတာ သူမကွိုကျရကောငျးလား ဟုမွငျ၍မရ။ ကှဲပွားမှုကိုလကျခံပေးရမညျဖွဈသညျ။ ဒါကွောငျ့ သူ့အကွိုကျ ကိုယျ့အကွိုကျကလေးမြား အကွောငျးဖလှယျရသညျ။ ကွိုကျမကွိုကျသညျ ခံစားခကျြဖွဈသဖွငျ့ ဒီဂရီအနညျးအမြားရှိသညျ့အတှကျ သုံးနှုနျးပွောဆိုပုံမြားသညျလညျး အမြိုးမြိုးဖွဈသညျ။
"I love eating ice-cream." ရခေဲမုနျ့စားရတာသိပျကွိုကျတာပဲ။
"I adore sun-bathing." နဆောလှုံရတာ မွတျနိုးသညျ။ ( adore = love and respect (someone) deeply.)
"She's mad about that new boy band." ထိုယောကျြားလေးအဆိုအဖှဲ့အပျေါသူတမျးတမျးစှဲဖွဈနသေညျ။
"He's crazy about that girl." သူသညျ ထိုမိနျးကလေးအပျေါရူးသှပျစှာစှဲလမျးနသေညျ။
"She's fond of chocolate." ခြောကလကျ တျောတျောနှဈသကျသညျ။
"I like swimming very much." ရကေူးရတာအလှနျကွိုကျသညျ။
"He really likes that new golf course." သူဂေါကျကှငျးအသဈကို တကယျ့ကိုသဘောကတြယျ။ (really တှငျဖိ၍ပွောရသညျ။)
"He quite likes going to the cinema." ရုပျရှငျရုံသှားရတာသူကွိုကျတယျ။
"I like cooking." ခကျြရပွုတျရတာကွိုကျတယျ။
ကွိုကျသညျလညျးမဟုတျ၊ မကွိုကျသညျလဲမဟုတျ (ထူးမခွားနား)
"I don't mind doing the housework." အိမျအလုပျတှလေုပျရလို့လဲ ဘာမှမဖွဈပါဘူး။ (စိတျမရှိဘူး)
"I don't really care either way." ဘာပဲဖွဈဖွဈ သိပျဂရုမစိုကျပါဘူး
"It's all the same to me." ငါ့အတှကျတော့ အတူတူပါပဲ။
"She doesn't like cooking very much." သူခကျြရပွုတျရတာ သိပျမကွိုကျဘူး။
"He's not very fond of doing the gardening." စိုကျရပြိုးရတာကို သိပျမနှဈသကျဘူး။
"He's notagreat fan of football." သူဘောလုံးပှဲကွိုကျသူတော့မဟုတျဘူး။
"Horse-riding isn't really his thing." မွငျးစီးပွိုငျပှဲဟာ သူ့အကွိုကျတော့မဟုတျဘူး။
"I dislike wasting time." အခြိနျဖွုနျးတာကိုမကွိုကျဘူး။
တဈခုခုကို မနှဈမွို့လြှငျ၊ မုနျးတီးလြှငျ
"I don't like sport at all." အားကစားကိုလုံးဝမကွိုကျဘူး။
"He can't stand his boss." သူ့သူဌေးကိုနညျးနညျးမှ(သီးမခံနိုငျ)မကွိုကျဘူး။
"She can't bear cooking inadirty kitchen." မီးဖိုခြောငျညဈညဈပတျပတျထဲခကျြရပွုတျရတာ မခံစားနိုငျဘူး။
"I hate crowded supermarkets." လူရှုပျတဲ့ကုနျတိုကျတှမေုနျးတယျ။
"He detests being late." နောကျကရြတာကို ရှံမုနျးတယျ။
"She loathes fish." သူကငါးဆိုရငျခါးခါးသီးပဲ။
Dislike formal ဖွဈသညျ့စကားလုံးဖွဈသညျ။
Fond of အစားအသောကျနှငျ့လူမြားအပျေါစှဲလမျးနှဈသကျမှုတှငျသုံးသညျ။
ယဘေုယကြွိုကျမကွိုကျကိုပွောရတှငျ like + Noun (something) or like + Ving (doing something.) like + to + Vinfinitive ပုံစံနှငျ့သုံးသညျ။
“I like to . . .” အား "I'd like…" နှငျ့မရောပါနှငျ့။ ၄ငျးသညျ အနာဂါတျတှငျလုပျခငျြသညျ့အရာ ကိုပွောခွငျးဖွဈသညျ။
very much သို့မဟုတျalot ကဲ့သို့သောစကားလုံးမြားသုံးရာတှငျ ၄ငျးတို့ အထူးပွုသညျ့စကားလုံးနောကျတှငျ ထားရသညျကိုသတိပွုပါ။